Tany - Wikipedia
Ny Tany ( ) dia ny planeta fahatelo raha ny elanelany amin’ny Masoandro no heverina ary izy irery ankehitriny no fantatra fa onenan-java-miaina eo amboniny. Ny tany dia niforona tamin’ny 4,5 lavitrisa taona lasa; anisan’ny planeta vato eto amin’ny Rafitry ny Masoandro izy io. Ny telo hafa dia i Merkiora sy i Venosy ary i Marsa.
Ny Tany, araka ny fahitana azy amin' ny alalan' ny fitaovana EPIC nentin' ny satelita DSCOVR, ahitana an' i Afrika sy i Eorôpa.
Mampihodina ny Tany amin'ny Masoandro ny lanja lehiben’ny Masoandro, tahaka ny lanja lehiben’ny Tany mampihodina ny Volana manodidina azy. Ny isan’ny andro ihodinan’ny Tany amin’ny Masoandro dia 365,25 andro eo ho eo. Izay no antsoina hoe herintaona. Ny isan’ny andro ihodinan’ny Volana manodidin’ny Tany dia 27,33 andro. Izay no niavian’ny anarana hoe «volana».
Ny Tany no planeta tena ahitana rano mikoriana eto amin’ny Rafitry ny Masoandro, ary 71% ny velarany manontolo no misy izany. Izay koa no iantsoana ny Tany ho «planeta manga».
Eto amin'ny Tany dia ahitana karazana zava-miaina eo amin’ny 14 tapitrisa eo ho eo. Eo amboniny no tena iainan’ny ankamaroan’izy ireo, ary misy ihany koa ireo karazan-java-miaina miaina any ambanin’ny tany. Niova be mihitsy ny zava-maina teto an-tany. Ohatra, tany am-boalohany, ny sianôbakteria dia nanova ny soson-drivotra iainana ary nanome ôksizenina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tany&oldid=1042597"
Dernière modification le 29 Desambra 2021, à 01:48
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2021 amin'ny 01:48 ity pejy ity.